Ihe & ngosi - JL Wepụ Co., Ltd
Ihe & ngosi
Osisi extracts maka nri mmako & Pet Food
Osisi extracts maka ụmụ ahụhụ, Fungicide, Bactericide & Virucide
Akwukwo nri, Mkpụrụ & Herbal ntụ ntụ
Ụbọchị: June, 2018
Tea Saponins Biological ọgwụ ahụhụ (EW, 5% n'ọrụ Efrata)
Anyị haziri ma mepere Tea Saponins Biological ọgwụ ahụhụ (EW), nke bụ a tii saponin dabeere Nwa nke niile eke Efrata. Ọ bụ a iche iche sara mbara na gburugburu ebe obibi enyi na enyi, Ubé Nsí Achọ, High arụmọrụ. Ugbu a anyị bụ ndị na ogbo nke pilot mmepụta nke Tea Saponins Biological ọgwụ ahụhụ.
Abstract: Ọ bụ emulsion na mmiri na Tea saponins dị ka isi mgwa mgbe High-tech nhazi, o nwere àgwà nke abụghị Nsí Achọ, No fọduru, No mmetọ, enyi na enyi na gburugburu ebe obibi, tii saponin mmiri emulsion nwere ezigbo effeciency na-egbu ụmụ ahụhụ nke Homoptera, Monochida , dipterous, dị ka Trialeurodes vaporariorum (Westwood), aphids, osikapa planthopper wdg na ụmụ ahụhụ nke Lepidoptera, dị ka Mites, kọlịflawa, Plutella algebra, Spodoptera exigua, budworm wdg
Ngwa: Ọ ga-eji ọnụ na ndị ọzọ ụmụ ahụhụ; ọ bụ nke ọ bụla nsogbu ka aṅụ na-adịghị ize ndụ mmadụ na anụ ụlọ. Ọ bụ nnọọ mma maka ihe ọkụkụ. The akara mmetụta pụrụ adịgide adịgide maka 15-20days na mma mmetụta maka ngwa na Green House
Ọnụọgụ ọgwụ: 1350gram-2250gram EW / hectare, 675-900kgs Water / hectare, Operation tupu 9am ma ọ bụ mgbe 4PM, zere na High okpomọkụ ihu igwe.
Okwu: C11, Beiyuan Villa, Biandian Street, 050061 Shijiazhuang, Hebei, China
Ekwentị: + 86-311- 87713100
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na Service na Products, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa.
© Copyright - 2005-2018: All Rights echekwabara.